ကျား - ဝီကီပီးဒီးယား
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ခဏ်းဟာ ကျားထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေမှ ဘင်္ဂလားကျားမ တစ်ကောင်၏ ပုံ
သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ မျိုးသုဉ်းသွားသော ကတ်စပီယံ ကျားများအပါအဝင် ၁၈၅၀ ခုနှစ်ခန့် (အဝါရောင်) နှင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ် (အစိမ်းရောင်) ကာလများတွင် ကျားများနေထိုင်ကျက်စားသောဒေသများ ဖော်ပြထားသောမြေပုံဖြစ်သည်။
Felis tigris လင်းနီးယပ်၊ ၁၇၅၈
Tigris striatus စီဗတ်ဇော့ဗ်၊ ၁၈၅၈
Tigris regalis ဂရေး၊ ၁၈၆၇
ကျားများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ၁၁ ပေခန့် ရှည်လျား၍ အလေးချိန်အားဖြင့် ၃၃၀ ကီလိုဂရမ် (၆၆၀ ပေါင်) ခန့်ရှိကြသည်။ ကျားတစ်ကောင်၏ အစွယ်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ၄ လက်မခန့် ရှည်သည်။ အချို့ကျားများသည် ၎င်းထက်ပင် ပို၍ ရှည်လျားကြသည်။ တောတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသက်အားဖြင့် ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ခန့်ထိ နေထိုင်နိုင်ကြသည်။ ၎င်းကို ချုပ်လှောင်မွေးမြူထားပါက အသက် ၂၀ ထိ ရှည်နိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ခြင်္သေ့သည် အာဖရိကတိုက်များတွင် စိုးမိုးနေသည်ကို တွေ့ရသကဲ့သို့ ကျားသည်လည်း အာရှတိုက်တစ်ခွင်တွင် သားကောင်များပေါ်၌ မင်းမူလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကယ်စင်စစ်ကျားမှာ ကျားဆရာကြောင်ဟုသော ဆိုရိုးစကားအတိုင်း ကြောင်မျိုးရင်း တွင်ပါဝင်သည်။ အိမ်တွင်လက်သတ်မွေးထားသော ကြောင်နှင့်နိုင်းစာကြည့်ပါက အရွယ်အစားကြီးမားခြင်းမှလွဲ၍ ခြားနားမှုများစွာ မရှိလှသည်ကို တွေ့ရသည်။
ကျားသည် တောက်ပြောင်လှပသော အသွေးအမွေး၊ အချိုးအစားကျနပြေပြစ်သော ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်၊ ဖျတ်လတ်ပေါ့ပါးသော ကိုယ်ဟန်တို့ကြောင့်၊ ကြောင်မျိုးဝင် တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့တွင် အလှပဆုံးနှင့် အချိုးအကျဆုံးဖြစ်သည်။ အာရှတိုက်တစ်ခွင်လုံးတွင် ကျားအမျိုးမျိုး ရှိသည့်အနက် ဘင်္ဂလားကျားမျိုးမှာ လူသိအများဆုံးဖြစ်သည်။ အခြားအတော်အသင့် လူသိများသော ကျားမျိုးတို့မှာ မန်ချူးရီးယားကျား၊ ကော်ကေးရှားကျားနှင့် ပသျှူးကျားမျိုးတို့ ဖြစ်သည်။ လူသိအများဆုံး ဘင်္ဂလားကျား၏အသွေးအမွေးမှာ အခြားကျားများနှင့် မတူ၊ နီဝါဝါအရောင် ရှိပြီးလျှင် တစ်ကိုယ်လုံးတွင် အနက်ရောင် အစင်းကြီးများဖြင့် လှပစွာရှိသည်။ ကျားကို သဘာဝက ဤကဲ့သို့ မြေကြီးနှင့် ခွဲမရအောင် ရောင်စုံခြယ်၍ ပေးထားသောကြောင့် တောချုံ ပိတ်ပေါင်းများအကြား သို့မဟုတ် မြက်ရှည်တောကြီးများ၏ အလယ်တွင် ရှိနေလျှင်၊ ကျားမှန်း ရုတ်တရက် ခွဲခြားသိရှိနိုင်ရန် ခဲယဉ်းသည်။
ကြောင်မျိုးတွင် ပါဝင်သော တိရစ္ဆာန်များမှာ ရေနှင့် များစွာမနီးစပ်ကြချေ။ သို့သော် ကျားမှာ ဤသို့မဟုတ်ဘဲ တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ထူး နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျားသည် ရေကူး ကျင်လည်၏။ ထိုမျှသာမက အလွန့်အလွန်အခက်အခဲ အကျဉ်းအကျပ်နှင့်တွေ့သည့်အခါများတွင် သစ်ပင်ကိုပင် တက်နိုင်သေးသည်။ ကြောင်ကဲ့သို့ ညည့်အချိန်တွင် ပို၍ မျက်စိစူးသဖြင့် နေ့အချိန်တွင် သားကောင်လိုက်လေ့ မရှိဘဲ ညအခါမှသာ လှည့်လည်ကျက်စားလေ့ရှိသည်။ အစာရှာထွက်သည့်အခါတွင် အမဲကောင်ကို မှောင်ခိုပုန်းလျိုး၍ အုပ်ဖမ်းသတ်ဖြတ်စားသောက်တတ်သည်။ သားကောင်လိုက်ရာတွင် အလွန်ပင် ရဲစွမ်းသတ္တိရှိ၍ မည်သည့် သတ္တဝါမျိုးကိုမဆို အယဉ် အရိုင်းမရွေး တွေ့မရှောင် ကိုက်သတ်လေ့ရှိသည်။
ကျားသည် လူကို အလိုအလျောက် ရန်ပြုခဲသည်။ လူကို သတ်ဖြတ်စားသောက်ရန် အပတ်တကုတ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်လေ့မရှိပေ။ သို့ရာတွင် လူ၏အသားကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မြိုးမြိုးမြက်မြက် စားလိုက်ရဖူးသော ကျားသည် လူကိုပင်လိုက်လံ သတ်ဖြတ်စားသောက်တတ်သည်။ ယခင်က စားခဲ့ဖူးသော အခြားအသားအားလုံးကို ပစ်ပယ်၍၊ လူ၏ အသားကိုသာ တန်းတန်းစွဲ တပ်မက်၍ နေသော ကျားမှာ အမှန်ပင် ကြောက်စရာကောင်းပေသည်။ အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့ရှိ တောထူထပ်သောနေရာများတွင် ကျားကို အလွန်တရာကြောက်ရွံ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားများသည် ကျားကို လွန်စွာကြောက်ရွံ့ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအရပ်ဒေသများတွင် တစ်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် ကျားကြောင့် လူတစ်ထောင်မျှ သေဆုံးကြရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်ငယ်သေးသော ကျားပျိုများသည် သန်စွမ်းရဲရင့်ကြသဖြင့် ကျားအိုများထက် ပို၍ကြောက်စရာကောင်းသည်။
အမဲလိုက်သမားများသည် ကျားပစ်ထွက်ရာ၌ အသက်ဆံဖျား စွန့်စားရသည်။ အချို့ကျားပစ်သမားများသည် ကျားကို ဆင်ပေါ်မှ အကာအကွယ်ယူ၍ ပစ်လေ့ရှိကြ၏။ အချို့မှာလည်း ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ၌ မကြခဏတွေ့ရသည့်အတိုင်းပင် လင့်စင်ထိုးကာ ပစ်လေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ပစ်သည့်အခါတွင် မိမိတို့အလိုရှိသည့် နေရာသို့ ကျားရောက်လာစေရန် ပစ်ကွင်းတွင် အမဲသေတစ်ကောင်ဖြင့် မျှားခေါ်ရသည်။
သို့သော် ကျားကို ပစ်ခတ်ဖမ်းယူရန်မှာ ထင်သလောက်မလွယ်ကူချေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျားသည် အကောင်ပင်ကြီးသော်ငြားလည်း အလွန်ပေါ့ပါးဖျတ်လတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျားမှာ အစာကို ရှာဖွေရာ၌သော် လည်းကောင်း၊ အစာရှာဖွေရာတွင် တွေ့ရသော အန္တရာယ်များကို ရှောင်ကွင်းရာ၌သော်လည်းကောင်း၊ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ပါးနပ်လျင်မြန်ရုံသာမက၊ ရဲလည်း ရဲရင့်ပေသည်။ ကျားမှာ သူဇာတိတောရိုင်းဒေသနယ်တွင်ဖြစ်မူ အသွေးအသားကို လိုချင်မက်မောသော သတ္တဝါဖြစ်သည်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မနေရဘဲ ချုပ်နှောင်ခံနေရသောအခါ ကျားသည် မည်သူ့ကိုမဆို သစ္စာဖောက်ဖျက်လျက် အသက်ကို ရန်မူရန် အခွင့်အရေးကို အမြဲတမ်း ရှာဖွေနေတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် တိရစ္ဆာန်ရုံများသို့ အလည်အပတ်သွားသည့်အခါတွင် ကျားကို သွားမစဘဲ စည်းကမ်းသေဝပ်စွာ ကြည့်ရှုရန် သတိပြုရမည်။
၂ မျိုးပွားခြင်း နှင့် မျိုးစပ်ခြင်း
၃ မျိုးသုဉ်းမှုအန္တရာယ်နှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု အခြေအနေ
၄ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျားကောင်ရေ
၆.၁ ရှင်သန်ဆဲတည်ရှိဆဲ မျိုးစိတ်ခွဲများ
၆.၂ မျိုးသုဉ်းသွားသော မျိုးစိတ်ခွဲများ
၇ ဘုန်းခန်း =
များသောအားဖြင့် ကျားများသည် တောတွင်းတွင် အကြီးစားသတ္တဝါများနှင့် အလတ်စားသတ္တဝါများ (ပေါင် ၂၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိသော) ကို အမဲလိုက်စားသောက်လေ့ ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ကျားများသည် အလွန်ကြီးမားသော အရွယ်ရောက်ပြီး အာရှဆင်များနှင့် အိန္ဒိယကြံများကို အမဲလိုက်လေ့ မရှိပေ။
မျိုးပွားခြင်း နှင့် မျိုးစပ်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ကျားတစ်ကောင်၏ အတွင်းပိုင်း အရိုးဖွဲ့စည်းပုံ
ကျားအမသည် တစ်ကြိမ်လျှင် ၂ ကောင်မှ ၅ ကောင်အထိ သားပေါက်တတ်၏။ မွေးဖွားပြီးစတွင် ကျားကလေးသည် မိခင်ကျားမကြီးနှင့် အချိန်အတန် ကြာသည့်တိုင်အောင် အတူတကွ နေထိုင်လေ့ရှိ၏။ အသက်သုံးနှစ်အရွယ်ခန့်တွင် သားကောင်လိုက်ပုံလိုက်နည်းကို မိခင်ကျားမကြီးက သေချာစွာ သင်ကြားပြသပေးသည်။ ထို့နောက်မှ မိမိဘာသာအလျောက် တသီးတခြားသားကောင် လိုက်ထွက်နိုင်သည်။ တိရစ္ဆာန်ရုံများတွင် ယခုအခါ [[ခြင်္သေ့နှင့် ကျားကို အတူတကွ မျိုးစပ်ပေါက်ဖွားစေနိုင်သည်ကို တွေ့ရ၏။ ဖခင်က ကျား၊ မိခင်ကခြင်္သေ့မဖြစ်လျှင် ကျားခြင်္သေ့ဟု ခေါ်၍ မိခင်ကကျားမ၊ ဖခင်က ခြင်္သေ့ဖြစ်လျှင် ခြင်္သေ့ကျားဟုခေါ်ကြလေသည်။
မျိုးသုဉ်းမှုအန္တရာယ်နှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု အခြေအနေ[ပြင်ဆင်ရန်]
တောရိုင်းသဘာဝ၌ တွေ့ရှိရသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျား အရေအတွက်
အိန္ဒိယ ၂၀၁၉ ၂,၆၀၃~၃,၃၄၆
ရုရှား ၂၀၁၆ ၄၃၃
တရုတ် ၂၀၁၆ ၃၄
ဗီယက်နမ် ၂၀၁၆ ၅ အောက်
လာအို ၂၀၁၆ ၁၄
ကမ္ဘောဒီးယား ၂၀၁၆ ၀
ထိုင်း ၂၀၁၆ ၁၈၉
မလေးရှား ၂၀၁၄ ၂၅၀~၃၄၀
မြန်မာ ၂၀၁၄ ၈၅
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၂၀၁၄ ၃၀၀~၅၀၀
ဘူတန် ၂၀၁၅ ၈၉~၁၂၄
နီပေါ ၂၀၁၈ ၂၂၀~၂၇၄
အင်ဒိုနီးရှား ၂၀၁၆ ၃၇၁
၂၀၁၀ခုနှစ်သည် တရုတ်ရိုးရာပြက္ခဒိန်အရ ကျားနှစ်ဖြစ်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မှ ပညာရှင်များ၏ ကွင်းဆင်းလေ့လာထားသော စစ်တမ်းများအရ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင် ကျားမျိုးကောင်ရေ (၃၆၀၀)ခန့်သာကျန်ရှိတော့သဖြင့် မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ပညာရှင်တို့၏ မှတ်တမ်းများအရ လွန်ခဲ့သော နှစ်(၁၀၀)ခန့်က ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျားကောင်ရေစုစုပေါင်း တစ်သိန်းခန့်ရှိခဲ့ပြီး နှစ်တစ်ရာကာလအတွင်း ဤမျှအထိလျော့ကျသွားခြင်းဖြစ်သည်။
ရုရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဗလာဒီမီယာပူတင်နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ရောဘတ်ဇိုးလစ် (Robert Zoellick) တို့၏ ဦးဆောင်စီစဉ်မှုဖြင့် "အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျားမျိုး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဖိုရမ်" ကို ၂၀၁၀ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့တွင် ရုရှားနိုင်ငံ၊ စိန့်ပီတာစဘာ့တ်မြို့တွင် ကျင်းပရန်ရှိသည်။ ကျားကောင်ရေလက်ကျန်ရှိနေသေးသော နိုင်ငံများဖြစ်ကြသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဘူတန်၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ မလေးရှား၊ နီပေါ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ် စုစုပေါင်း (၁၃)နိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။ ပညာရှင်များ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းမပြုပဲ ယခုအတိုင်းသာ ထားလိုက်ပါက လာမည့်နှစ်တွင် ကျားကောင်ရေ ၂၀၂၂ကောင်ခန့် ထပ်မံကွယ်ပျောက်နိုင်ကြောင်း ထောက်ပြထားကြသည်။ ရုရှားနိုင်ငံတွင် ဆိုက်ဘေးရီးယားကျားမျိုး ကောင်ရေ (၄၀၀)ခန့် ကျန်ရှိနေသေးပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ကျားကောင်ရေ (၁၅၀)ကျော် ကျန်ရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ( World Wildlife Fund - WWF) ၏ စစ်တမ်းကောက်လေ့လာချက်အရ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင် ကျားကောင်ရေ (၁၀၀၀)ကျော် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။ တစ်နှစ်လျှင်ပျမ်းမျှ (၁၀၄)ကောင်မှ (၁၁၉)ကောင်နှုန်းဖြင့် ပျောက်ကွယ်နေရသည်။ ကမ္ဘာ့ကျားကောင်ရေစုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်ကျော်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ရှိနေပြီး တရုတ်နိုင်ငံသည် ကျားကို ဆေးဖော်ရန်အတွက် အသုံးချသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ တရုတ်အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်လည်း နှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်မျှ အရိုးစွဲလာခဲ့သော ရိုးရာ အစဉ်အလာဖြစ်နေသည့် အတွက် အဆိုပါ ကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ရ ခက်ခဲနေသည်။    
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျားကောင်ရေ ၁၅၀ ဝန်းကျင်အောက်သာ ကျန်ရှိတော့သောကြောင့် သိပ္ပံနည်းကျ စာရင်းကောက်ယူမှုများကို သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားရန် ရှိသည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကျားထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ ဖြစ်သည့် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်း ကျားထိန်းသိမ်းရေးဒေသတွင် ကျားကောင်ရေ (၅၀) ကျော်သာ ရှိတော့ကြောင်း သိရှိရသည်။  ကျားမျိုးများ လျော့နည်း လာရခြင်းမှာ ကျားနေထိုင်ရန် သစ်တောများပြုန်းတီးလာခြင်း၊ ရာသီဥတု အခြေအနေနှင့် အမဲလိုက်ခံရခြင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကြောင်မျိုးရင်းတွေထဲမှ Panthera လို့ခေါ်တဲ့ ကြောင်မျိုးရင်းခွဲတွင် နှင်းကျားသစ် (Snow Leopard)၊ ကျားသစ် (Leopard)၊ ဂျိုက်ဂွါး (Jagaur)၊ ခြင်္သေ့ (Lion)၊ ကျား (Tiger)စသည့်တို့ ပါဝင်ပြီး ကြောင်မျိုးရင်း အားလုံးထဲတွင် ကျားသည်အရွယ်အစားအားဖြင့် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
ကြောင်မျိုးရင်းထဲတွင် အကြီးဆုံးသတ္တဝါဖြစ်သောကျားတို့သည် ဘင်္ဂလား ၊ မန်ချူးရီးယား၊ စူမတြား ၊ အင်ဒိုချိုင်းနား စသဖြင့် ကျားမျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာရှိပြီး ထိုအထဲမှာ ဆိုက်ဘေးရီးယားကျားက အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကျားတွေကို အာရှတိုက်တစ်တိုက်လုံးမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ခြင်္သေ့တွေအာဖရိက ကိုရောက်သွားရခြင်းမှာ ရှေ့ယခင်ကအာရှတွင် ကျားတွေအဆမတန်ပေါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျားမျိုးစိတ်ထဲမှာ အရှားပါးဆုံးကတော့ ရွှေရောင်ကျားဖြစ်ပါတယ်။ လူသိအများဆုံး ဘင်္ဂလားကျား၏အသွေးအမွေးမှာ အခြားကျားများနှင့် မတူ၊ နီဝါဝါအရောင် ရှိပြီးလျှင် တစ်ကိုယ်လုံးတွင် အနက်ရောင် အစင်းကြီးများဖြင့် လှပစွာရှိနေတတ်ပါတယ်။
လက်ခံအသိအမှတ်ပြုထားသော ကျား မျိုးစိတ်ခွဲ (၁၁) မျိုးရှိသည်။ ယင်းတို့အနက် နှစ်မျိုးဖြစ်သည့် ထရီနီးနှင့် ဂျပန်ကျားများသည် သမိုင်းမတင်မီ ခေတ်ကတည်းကပင် မျိုးသုဉ်းသွားခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သည်။ ကျန်မျိုးစိတ်ခွဲများ အားလုံးသည် အနည်းဆုံး ၂၀ ရာစု အလယ်ပိုင်းအထိ ရှင်ကျန်ခဲ့ကြပြီး ယင်းတို့အနက် သုံးမျိုးကို မျိုးသုဉ်းသွားခဲ့ပြီဟု သတ်မှတ်ခဲ့ကြပြန်သည်။ တောင်အာရှ (အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်)၊ အရှေ့အာရှ (တရုတ်၊ မွန်ဂိုးလီးယား၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ ဆိုက်ဘေးရီးယား၊ တောင်ကိုရီးယား) နှင့် အင်ဒိုနီးရှား ကျွန်း သုံးကျွန်း အပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသများတွင် ကျားများ၏ အဓိက သမိုင်းအစဉ်အလာကြီးသော နယ်မြေများသည် အလွန်အမင်း ကျုံ့လာနေပြီး ပင်လယ်နက် (အီရန်၊ ဂျော်ဂျီယာ၊ တောင်ပိုင်း ရုရှား၊ တူရကီ) နှင့် ဗဟို အာရှ (ကာဇက်စတန်၊ တက္ကမန်နစ္စတန်၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်) ဒေသများတွင် မျိုးသုဉ်းသွားပြီ ဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ်တိုင် ကျန်ရှိနေသေးသည့် မျိုးစိတ်ခွဲများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
အောက်ဖော်ပြပါ ကျား အမျိုးအစားများမှာ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားသော မျိုးစိတ်ခွဲများ ဖြစ်သည် -
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ "Panthera tigris" (2015). IUCN Red List of Threatened Species 2015. IUCN.
↑ Linnaeus, C. (1758)။ "Felis tigris"။ Caroli Linnæi Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis (လက်တင်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Tomus I (decima, reformata ed.)။ Holmiae: Laurentius Salvius။ p. 41။
↑ Dinerstein, E. (2007). "The Fate of Wild Tigers". BioScience 57 (6): 508–514. doi:10.1641/B570608.
↑ မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း (၁၉၅၅)။ "ကျား"။ in စွယ်စုံကျမ်းစာတည်းအဖွဲ့ (ed.)။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း။ ၂ (ပထမအကြိမ် ed.)။ ဟေဇယ်၊ ဝပ်ဆင်နှင့် ဗိုင်းနေး လီမီတက် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း၊ အင်္ဂလန်။: စာပေဗိမာန်။ pp. ၃-၅။
↑ Jhala, Y. V.; Qureshi, Q. & Nayak, A. K., eds. (2019)။ Status of tigers, co-predators and prey in India 2018. Summary Report. TR No./2019/05။ New Delhi, Dehradun: National Tiger Conservation Authority & Wildlife Institute of India။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ ၆.၃ Global Tiger Forum (2016)။ Global wild tiger population status, April 2016။ Global Tiger Forum, WWF။
↑ Wang, T. (2016). "Amur tigers and leopards returning to China: direct evidence andalandscape conservation plan". Landscape Ecology 31 (3): 491–503. doi:10.1007/s10980-015-0278-1.
↑ "Documenting the demise of tiger and leopard, and the status of other carnivores and prey, in Lao PDR's most prized protected area: Nam Et-Phou Louey" (2019). Global Ecology and Conservation 20: e00766. doi:10.1016/j.gecco.2019.e00766.
↑ Dorji, S.; Thinley, P.; Tempa, T.; Wangchuk, N.; Tandin; Namgyel, U. & Tshewang, S. (2015)။ Counting the Tigers in Bhutan: Report on the National Tiger Survey of Bhutan 2014 – 2015 (အစီရင်ခံစာ)။ Thimphu, Bhutan: Department of Forests and Park Services, Ministry of Agriculture and Forests။
↑ Poudyal, L.; Yadav, B.; Ranabhat, R.; Maharjan, S.; Malla, S.; Lamichhane, B.R.; Subba, S.; Koirala, S.; Shrestha, S.; Gurung, A.; Paudel, U.; Bhatt, T. & Giri, S. (2018)။ Status of Tigers and Prey in Nepal (အစီရင်ခံစာ)။ Kathmandu, Nepal: Department of National Parks and Wildlife Conservation & Department of Forests and Soil Conservation, Ministry of Forests and Environment။
↑ 13 nations meet to try to save wild tigers - CNN.com။ 18 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Putin, Wen, other leaders in bid to save the tiger | Reuters
↑ Tiger summit aims to double numbers - BBC News
↑ AFP: World leaders scramble for funds to save the tiger
↑ တောရိုင်း တိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့အစည်း (Wildlife Conservation Society-WCS)
↑ PBDB. www.paleobiodb.org. Retrieved 2017-03-03.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျား&oldid=744113" မှ ရယူရန်
CS1 လက်တင်-ဘာသာစကား ရင်းမြစ်များ (la)
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၃:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။